AKhriso:- Safiirada Kenya, Turkiga, Midowga Yurub iyo Ingiriiska oo la magacaabayo - Hablaha Media Network
AKhriso:- Safiirada Kenya, Turkiga, Midowga Yurub iyo Ingiriiska oo la magacaabayo
HMN:- Dowladda federaalka Somalia ayaa maanta lagu wadaa in ay shaaciso safiirada afar dal, waxaana safiiradaasi lagu ansixin doonaa maanta kulanka golaha wasiirada ee khamiislaha ah.
Safiirada lagu ansixinn doono kulanka maanta ayaa gaaraya ilaa afar safari, kuwaasi oo ay ka mid yihiin, Safiirka UK oo loo magacaabi doono C/raxmaan Ceynte oo ka mid ah la-taliyeyaasha madaxweynaha, judo ahaana ra’iisul wasaaraha is xigaan.
Safiirka Midowga Yurub iyo Belgium-ka oo loo magacaabi doono Cali Fiqi Cumar horayna xilkaan usoo hayaay, balse markii danbe si KMG ah loogu magacaabay agaasimaha madaxtooyada markii danbena loo magacaabay Abuukar Daahir Cismaan.
Waxaa kaloo la magacaabi doonaa maanta Safiirka Turkiga ee Soomaaliya Jaamac Ceydiid iyo Safiirka Kenya oo noqon doona Xuseen Qaasim, mas’uulkaan ayaa horay ul soo shaqeeyay kooxda UN Monitoring Group Matt Bryden. wuxuuna mas’uulkaan kasoo jeeda dhulka ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya.
Xubnahaan ayaa ah kuso ay kala wataan madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha oo mid walba uu isagu keensaday.